Fampandrosoana inona ity resahana betsaka any Madagasikara ity? – Malag@sy Miray
Fampandrosoana inona ity resahana betsaka any Madagasikara ity?
Ndeha ary hiresakafampandrosoana e!Samy mahay miresaka daholo rehefa mahazo ilay fitaovana idiransquowhawydny feo kendrena hanjary ho avo rehefa mikarantsana mivoaka aminsquowhawydilay vata fanamafisana iny, samy mailaka manoratra avokoa izay efa ampy fahazarana ka mahazo ilay fitaovana fitendry ho fandrafetana ny teny avy eo imolotra sy ny hevitra avy ao an-tsaina hanjary soratra azo vakiana eo aminsquowhawydny tava mazavansquowhawydny solosaina, eny, samy maneho hevitra daholo izay tonga eo aminsquowhawydny Blaogy, dia ity fafy hevitra an-tranonkalan-tserasera ity, tahaka izao anio izao. Saingy ity re no asa: mba misy mahay mampandroso tokoa ve? Fampandrosoana mantsy izao no resaka. Tsy fampandrosoana manao tifi-danitra anefa izany ambarako izany fa fampandrosoana tena mikendry ny fahavalo na fampandrosoana tena mikendry ny haza. Napetrako ny hoe » mitifi-danitra» mba hitaha aminsquowhawydny hoe «mikendry», izany hoe efa ratsy sahady izay tsy fananana fikendrena mazava ny tanjo-kiantefana izay, efa fatiantoka be sahady izay.
Nefa ny mitranga any Madagasikara ankehitriny aza dia mbola ratsy lavitra no ho izany. Tsy mba «ilay lanitra tsy hianjera» no atao maty tifitra, tsy ny rahona manalokaloka iny «fonenansquowhawydny olo-masina» iny akory aza no atao bokansquowhawydny voam-bala, fa ny namana sy tapaka, ny rahalahy sy ny anabavy miavo-tena, ny mpiara-mizara diansquowhawydomby. Ny lohantsika malagasy miondana rotsirotsy fampandrosoana fa ny fanambanintsika dia mbola mitombona tsara eo aminsquowhawydny sezansquowhawydny fanjanahan-tany ihany. Iza no tsy mahatadidy fa io ampahan-tantara matroka loatransquowhawydny firenentsika io dia nivelararansquowhawydny foto-kevitra toto tànana miorina aminsquowhawydny fitsinjovana ny aina hoe:«raha ho faty aho matesa rahavana» ara-bakiteny, izay nirandrana niaraka taminsquowhawydny «zarazarao hanjakana» izay tsy inona fa filozofiam-pitsetsafana nentinsquowhawydny sambo niaraka taminsquowhawydny vanja sy afo avy any dilam-bato. Alin-dririnina nateza no vokany maharitra mandrakandroany. Ny haizina mikitroka mitarika ny tsirairay tsy hahalala na iza na iza ankoatra ny tena ary ny hatsiaky ny faty manara mahaara-dalàna ny fisintonan-damba hamonofono ny isam-batansquowhawydolona hatrany an-tampon-doha ka hatrany am-paladia. Mampangirifiry ny hafa ny zava-bitansquowhawydny sasany nefa ny «HAFA» toa tsy mahatsiaro akory ho tomponsquowhawydandraikitra na dia mitaraina aza ny «SASANY». Tsy voatery ho noho ny faharatsian-piniavana anefa izany, indrisy, fa mety ho noho ny aretina mihitsy ihany koa: Homamiadansquowhawydny toe-tsaina no anarany. Maro no voansquowhawydio aretina io aminsquowhawydny Malagasy. Tsy miafinafina ny fisehonsquowhawydny soratrsquowhawydaretina fa mibaribary. Jereo anie fa na dia efa ho dimampolo taona aza izao no namahana ny fatoransquowhawydny tànana aman-tongotrsquowhawydi Madagasikara, hatraminsquowhawydizao andro hifampiresahantsika izao dia mbola misy olona toy ny mandeha aminsquowhawydny tongotra sy tànana mikambana toa mbola voagia am-patorana ihany manerana ny NOSY.
Tsy mba afaka mivelatra fa tery saina sy tsy mahay afa-tsy ny manakiana izay mandray andraikitra fotsiny nefa rehefa andrasan-kanao mihodina tsy misy fialan-tsiny akory fan a manaiky am-pahibemaso aza mihodivitra dia tsy hita. Tsy mba afaka hanao ezaka mba ho tonga mpandray anjara aminsquowhawydny hazakazaka imasoansquowhawydizao tontolo izao aminsquowhawydny fampivoarana misandrahaka aminsquowhawydny lafiny rehetra ny olona voakiky toe-tsaina toy izany fa lany andro aminsquowhawydny dia miadana tsy an-tsafidy mihazona azy hifanipaka samy izy toa «valala an-karona». Ny hery kely sisa hananany izay mety mbola mba mahatahiry fanatenana tsy maty aza, vokatrsquowhawydity aretin-dratsy ity, dia tsy hainy fehezina fa toa lasa ho azy any aminsquowhawydny fanaingana ny angibansquowhawydny fifampialonana sy ny kanonta fanorotoroana ho enti- manenjika izay sahy mandrayny faneva. Mila fitsaboana maika ity homamiadansquowhawydny toe-tsaina ity fa io, raha tsy mitandrina isika, no handemy antsika mianankavy ao. Dia avy eo anie io koa no hahalasa antsika tsimoramora ho rembinsquowhawydny fasansquowhawydny Fampandrosoana mahery mitifitra; nefa tsy mikendry afa-tsy ny havana aman-tsakaiza manomboka ho afa-tsakana.
Par Randrianandrasana 22 Commentaires
Je suis un amateur de la littérature. J'écris pourtant en amateur des poêmes, des pieces théatrales, des essais et des critiques. Je suis enseignant à l'Ecole Normale Luthérienne Fandriana. Je suis soucieux de l'efficacité de l'enseignement pour tirer Madagascar de sa "perdition" actuelle. Je suis partisant de la non-violence sur toutes ses formes. Je suis Chrétien. Je suis convaincu que Jésus-Christ est Fils de Dieu et qu'Il seul est le Sauveur du Monde.
1 décembre 2007 à 8:45
Kay! hay ve mahavalalanina be toa izao ny mamaky teny malagasy lava e? 😉
1 décembre 2007 à 10:31
Nefa i Jentilisa izany ary efa mpanoratra sy mpamaky (sy miteny raha teo) teny gasy a!
Ho hamakianao amin’ny alatsinainy izany momban’i fitetezana an’i blaogasyfera.:)
Randrianandrasana> ka dia tonga soa eto amin’ny MM izany! Raha mazoto hitantara manao ahoana ny any Norvege any, aza misalala.
1 décembre 2007 à 10:45
Tena henjana ilay resaka amin’ny teny malagasy voadika soa aman-tsara.
Raha ny fijeriko aloha, mety ho diso aho, dia mila fantatry ny rehetra tsara ny antony tokony handrosoana sy hampivoarana ny tontolo sy ny toe-karena vao ahatsapa ny tsirairay fa ilaina izany. Satria mantsy raha mbola mahafinaritra azy ny zavatra iainany tsy hieritreritra ny hiova izy.
Faharoa manaraka izay, mila manana drafitra na tetika maty paika ireo izay hitarika ny fampandrosoana. Mety azo antsoina hoe Boky mena na MAP na « livre vert » na baiboly ny fitaovana mirakitra izany.
Fahatelo, tsara ampitàna amin’ny rehetra ny lesoka sy ny soa hita mandritra ny làlana mba hanovana, hanatsaràna na hitadiavana vaha-olana hafa.
Fahaefatra, mila miara mirona sy miroboka fa tsy mialangalana. Samy mandray andraikitra fa tsy faly manakina be fahatany mba tena ho tsapa sy hita fa iny ianao nitondra ny anjara biriky.
1 décembre 2007 à 10:47
Ny tena hita fa tsy ampy eto amin’ny firenen-tsika dia ny fanarahan-dalàna. Mila jadona kely angamba ve? Mety tsy izay intsony loatra angamba fa hoe mila mandray andraikitra araka ny voalaza etsy ambony e.
1 décembre 2007 à 12:12
Rehefa kelikely asiana lalàna ato hoe amin’ny teny malagasy madio ihany no azo hametrahana lahatsoratra… Fa alohan’izay hampianarina teny malagasy aloha nareo…
1 décembre 2007 à 15:55
Tongasoa Randrianandrasana 😉
Tsara safidy ny loha-hevitra hofidianao fa tena mahaliana ny ato amin’ny Blaogasyfera mihintsy ny resaka fampandrosoana. Ny ahy angamba ny fanontaniana apetrako dia izay fifandraisana (articulation) mety hipetraka anivon’ny fampandrosoana samirery sy ny fampandrosoana firenena: tsy karazana vokatry ny fitambarana fampandrosoana samirery (personnel) ihany ve izy io e ?
1 décembre 2007 à 17:16
Aza masiaka ianao dotmg fa mbola be loatra ny tsy mahay manoratra teny malagasy…aleo hilamina tsimoramora eny ihany sady ny teny malagasy rahateo azo atao na dia tenim-paritra aza.
1 décembre 2007 à 18:56
Mahafinaritra tokoa ny mahita lahatsoratra @ teny gasy ranoray. Raha mandray anjara @ izao dinika izao aho dia miala tsiny avy hatrany @ vary @ ananana izay ampiasaina satria dia misy ny voambolana izay tsy haiko ny mandika azy. Ialana tsiny koa ny fahadisoan-tsipelina eny an-tsefatsefany eny.
Inona moa ny atao hoe fandrosoana ? Samy manana ny famaritany azy ny tsirairay tahaky ny fananana fijery isan-karazany momba ny fahantrana. Ireo roa ireo (fandrosoana sy fahantrana) moa dia tsy dia misaraka loatra fa matetika toy ny vary sy rano rehefa resahana. Isan’ny fivoarana lehibe (efa ho taona maromaro izao) nampidirina @ economic development, izany hoe ny sampana manokan’ny siansa ara-toekarena mandalina ny fandrosoana, ny fampivadiana ny fandrosoana faobe @ izay famaritana ny fampandrosoana araky ny fahatsapan’ny tsirairay azy. Izany hoe tsy ny fandrosoana ara-toekarena (karama, …) irery akory no atao hoe fandrosoana. Tsy ny fakana tahaka @ fomba fiainan’ny hafa (ohatra firenena tandrefana) ny fandrosoana. Izay fampivadiana izay dia mandray ny resaka capabilities nentin’ingahy Amartya Sen. Raha tsotsorina io capabilities io dia ny fahalalahan’ny tsirairay mamehy ny tontolo manodidina azy ka hitondrany ny fiainany araky ny faniriany.
Izay famaritana ny fandrosoana malalaka izay dia miteraka olana rehefa tonga ny fandrafetana ny tetik’ady ho @ fampandrosoana. Indraindray na matetika mihitsy aza ny tsy fitovian’ny tadin-dokanga eo @ mpiketrika ny tetik’ady sy ny vahoaka heverina iantefan’ilay tetik’ady. Ny fahatsapana izay no nampipoitra tao anatin’ny fivoaran’ny fandinihina ny fandrosoana ny hevitra toy ny hoe participation : fandraisana anjaran’ny tsirairay @ fampandrosona sy ny empowerment : fananana toerana @ rafitra (institutions) ara-toekarena, ara-tsosialy, ara-politika miantoka ny fandrosoana. Ireny hevitra participation sy empowerment ireny no niteraka an’ireo partipatory processes hita @ tany an-dalam-pandrosoana efa ho taona maro izao. Ohatra @ izany ny niainan’ny Malagasy tany @ taona 2000-2003 raha nanoratra ny Prsp na vao tato anatin’ny iray volana t@ alalan’ny Dinidiniky nomanin’ny Filoha ho @ Map. Manampy an’ireo hevitra participation sy empowerment ireo moa ny fikarohana sy fanaovana fanadihadiana ao anatin’ilay hoe participatory poverty assessment – PPA mba hihainoana mivantana ny hevitry ny olona heverina fa « mahantra ».
Raha hamaly ny fanontanian’i Tomavana ary aho dia hilaza fa marina tokoa fa rehefa mihevitra ny tsirairay fa mandroso izy dia azo lazaina fa mandroso ny fiaraha-monina sy ny firenena. Saingy kosa tsy vitan’ny hoe mila miezaka sy mandray andraikitra ny tsirairay dia tonga izay fandrosoana izay. Misy ny zavatra izay tsy vitan’ny herin’ny tena irery, indrindra ny famokarana ilay lazaina hoe public goods ilain’ny fiaraha-monina. Fepetra roa matetika no amaritana an’ireo public goods ireo. Ny fampiasan’ny olon-tokana azy dia tsy manakana ny hafa hanjifa azy koa : izay ilay hoe non-rivalness. Misokatra ho an’ny rehetra ny fanjifana ka tsy hanavahana sokajin’olona : io ilay hoe non-excludability. Ohatra matetika fampiasa momba ny public goods moa ny jiro manazava eny an-dalambe.
Isan’ny manana andraikitra betsaka @ famokarana ny public goods izay ny rafi-pandaminana ny fiaraha-monina na institutions. Ho an’ny mpahay toe-karena (tsy mitovy @ fijerin’ny mpahay lalàna) dia tsy ny rafi-panjakana irery akory no voafehin’io institutions io, fa izay rehetra vokarin’ny olona handrafetany ny fifandraisana ara-toekarena, ara-politika, ara-tsosialy. Tafiditra @ izany ny rafitra hita maso (fikambananana, kaoperativa, …). Ao koa ny tsy hita maso toy ny lalàna, ny tsena, ny fombafomba eny hatr@ ireo nentim-paharazana mihitsy aza, … Ny kalitaon’ireo rafitra maro indray dia miankina @ ilay resaka governance fandretsika etsy sy eroa. Raha misy ny zavatra nanamarika ny fandinihana ao anatin’ny economic development nanomboka t@ taona 90’s dia ny mihodidina @ izay resaka rafitra (institutions) sy governance izay.
2 décembre 2007 à 0:00
@jentilisa : « raha lava ny ahitra very ny kisoa » ozy ingahy ramilison besigara !
2 décembre 2007 à 16:03
[quote comment= »1564″]Kay! hay ve mahavalalanina be toa izao ny mamaky teny malagasy lava e? ;)[/quote]
Misaotra anao JENTILISA a! Voaraiko ny hafatra e! Raha fanintsiana ahy tsy hanao lahatsoratra LAVA be no tanjonao dia mifalia fa tena tratranao 100% izy. Menatra sy mangahiahy mihitsy aho mamaky io fehezan-teninao fohy nefa mavesa-danja io. Misaotra fa tsy ho ataoko raraka an-tany izany teninao izany! Angamba tsy dia misy mahasamihafa izay tanjon’i Jentilisa izay amin’ny tanjon’i JIOSY e! Koa mba tsy hahalava ny resaka sy mba tsy hahavery ny soa dia valiny iray sy toky iray no homeko anareo miaraka: Hiezaka aho hamintina ny zavatra tiako ho ambara amin’ny manaraka. MISAOTRA tompoko.
2 décembre 2007 à 16:08
[quote comment= »1571″]Rehefa kelikely asiana lalàna ato hoe amin’ny teny malagasy madio ihany no azo hametrahana lahatsoratra… Fa alohan’izay hampianarina teny malagasy aloha nareo…[/quote]
MIsaotra betsaka anao Dotmg amin’ny fomba fanitsiana tena manindrona. Sady maharary no mahamenatra izany hoe Gasy ray sy reny nefa tsy mahay manoratra teny malagasy nefa tsy hitanondrehana izany fa ny miezaka no vahaolana. Tsapako tokoa fa mbola tsy mahay manoratra teny malagasy aho ary marina ny teninao hoe mila ampianarina teny malagasy aho. Hiezaka aho amin’ny sisa. Nefa mety tsy ho avy hatrany dia hahay be tahaka ny hafa aho fa mba mandeha miandalana eo e! Misaotra amin’ny fanampiana e!
2 décembre 2007 à 16:11
[quote comment= »1577″]Aza masiaka ianao dotmg fa mbola be loatra ny tsy mahay manoratra teny malagasy…aleo hilamina tsimoramora eny ihany sady ny teny malagasy rahateo azo atao na dia tenim-paritra aza.[/quote]
Dia mbola izaho ihany ity Jentilisa a! Tsy ny halavany ihany no olana mahazo ahy fa na ny fomba fanoratra ny teny malagasy koa aza dia fahalemena be hita ao amin’ny lahatsoratra nosoratako. Misaotra manitsy e! Voaray ny hafatra ka hanao izay azo hatao aho mba tsy hahatonga ny hafa ho tezitra na halahelo noho ny tsy fahaizako ny fanoratra teny malagasy sy ny tsy fahaizako mamintin-kevitra.
2 décembre 2007 à 16:17
[quote comment= »1578″]Mahafinaritra tokoa ny mahita lahatsoratra @ teny gasy ranoray. Raha mandray anjara @ izao dinika izao aho dia miala tsiny avy hatrany @ vary @ ananana izay ampiasaina satria dia misy ny voambolana izay tsy haiko ny mandika azy. Ialana tsiny koa ny fahadisoan-tsipelina eny an-tsefatsefany eny.
Isan’ny manana andraikitra betsaka @ famokarana ny public goods izay ny rafi-pandaminana ny fiaraha-monina na institutions. Ho an’ny mpahay toe-karena (tsy mitovy @ fijerin’ny mpahay lalàna) dia tsy ny rafi-panjakana irery akory no voafehin’io institutions io, fa izay rehetra vokarin’ny olona handrafetany ny fifandraisana ara-toekarena, ara-politika, ara-tsosialy. Tafiditra @ izany ny rafitra hita maso (fikambananana, kaoperativa, …). Ao koa ny tsy hita maso toy ny lalàna, ny tsena, ny fombafomba eny hatr@ ireo nentim-paharazana mihitsy aza, … Ny kalitaon’ireo rafitra maro indray dia miankina @ ilay resaka governance fandretsika etsy sy eroa. Raha misy ny zavatra nanamarika ny fandinihana ao anatin’ny economic development nanomboka t@ taona 90’s dia ny mihodidina @ izay resaka rafitra (institutions) sy governance izay.[/quote]
Tsy dia tena havanana amin’ny fandalinana ny resaka toe-karena aho SHADOW ka tena variana sy tena finaritra mahita ny famelabelaranaoazy amin’ny fomba tena ara-teknika. betsaka no mila hazavaina rehefa miresaka hoe FANDROSOANA. Ka tena dingana lehibe izao natonao izao manampy ny hafa mampahalala ny renin-kevitra anisany mila resaka manokana. Iarahantsika manana ny fahasarotana eo amin’ny fanoratana ny teny malagasy nefa izaho indray aza mahatsapa ny anao mazava kokoa ny hevitra no ho ny ahy. Hiezaka isika hanatsara e! Izay koa dia efa dingana atao ho amin’ny fampandrosoana! Misaotra e!
2 décembre 2007 à 16:32
[quote comment= »1572″]Tongasoa Randrianandrasana 😉
Tsara safidy ny loha-hevitra hofidianao fa tena mahaliana ny ato amin’ny Blaogasyfera mihintsy ny resaka fampandrosoana. Ny ahy angamba ny fanontaniana apetrako dia izay fifandraisana (articulation) mety hipetraka anivon’ny fampandrosoana samirery sy ny fampandrosoana firenena: tsy karazana vokatry ny fitambarana fampandrosoana samirery (personnel) ihany ve izy io e ?[/quote]
Mila fanazavana kely angamba aloha ry TOMAVANA tokony ho atao mialoha ny hilazana hoe: vokatry ny fitambaran’ny fandrosoana samirery ihany ny fandrosoan’ny firenena. Ny tena olana mantsy any amin’ireto tany antsoina hoe tany andalam-pandrosoana (Tsy maharesy klahatra ahy loatra ny mampiasa io teny io satria efa diso raha ny fijeriko azy. Ho hazavaiko amin’ny lahatsoratra ao aoriana kely) ireto dia ny fisongadinan’ny fahasamihafana eo amin’ny mahantra sy ny manan-karena. Mazana dia tsy mihena fa mainka mitombo aza io elanelana misy eo amin’ny roa tonta io. Ka raha ho lazaintsika hoe ny fandrosoan’ny tsirairay eo amin’ny tontolon’ny manan-karena no mitarika ny fandrosoan’ny firenena, amin’io tranga io dia diso be satria ny manan-karena manampatra ny filan-kareny (izay mpahazo ny ankamaroan’ny olona: arakaraky ny hananana no haniriana hanana be be kokoa hatrany). Misy fepetra tokony hipetra angamba aloha vao marina ny hoe ny fandrosoan’ny firenena dia vokatry ny fandrosoan’ny tsirairay. Io mihitsy ange ry Tomavana no tsy miady any amintsika e! Ny samy manana , ny samy mahay, ny samy malaza, ny samy tiam-bahoaka koa aza dia mifampialona amin’ny ankamaroan’ny tranga hita. Nefa raha mahay mifanampy sy miara-miasa ireny samy sangany ireny dia mino aho fa hisy sanga hafa hisondrotra hatrany hatrany dia izay ilay fandrosoan’ny firenena vokatry ny fandrosoan’ny tsirairay. Sa ahoana hoy ianao?
2 décembre 2007 à 16:39
[quote comment= »1579″]@jentilisa : « raha lava ny ahitra very ny kisoa » ozy ingahy ramilison besigara ![/quote]
Ny serasera indray no mba tiako hanampiana ny famaliana ny hafatrao voaraiko tsara ry Jiosy. Hitanao fa efa sarotra ny fomba fampitan-kevitra mba ho voarain’ny hafa ankehitriny. Mbola hanazava misimisy ny amin’ity serasera ity ihany aho aoriana fa mba te hametraka fotsiny hoe raha mba zavatra azo tenenina tonga dia mivantana re avy hetrany dia ambarao mahitsy fa simba anie ny serasera raha hanjakan’ny esoeso sy ny tsindrom-paingotra lava izao e! Maro mantsy ny toa ahy mbola vao miana-mandeha ny amin’ny fanoratana amin’ny blaogy ka « raha havana mba mila vonjy re aza torahana vato kilonjy e » Ianareo no zoky be toa ray ato, ianareo ny mpisava làlana ka aza ihomehezana na esoesoina re raha solafaka fa tolory tànana hiarina e! Misaotra Jiosy a!
2 décembre 2007 à 16:50
[quote comment= »1569″]Ny tena hita fa tsy ampy eto amin’ny firenen-tsika dia ny fanarahan-dalàna. Mila jadona kely angamba ve? Mety tsy izay intsony loatra angamba fa hoe mila mandray andraikitra araka ny voalaza etsy ambony e.[/quote]
Ny teny hoe jadona angamba henjana loatra amin’ny fanabeazana ny vahoaka fa ndeha ho antsointsika hoe fepetra. Mila fepetra ny fiainana an-davan’andro ao amin’ny firenena iray eo amin’ny sehatra rehetra fa tsy dia tokony ho afaka manao izay danin’ny kibony ny tsirairay. Izay tsy manaja izany dia handraisana FEPETRA mba sady ho voahitsy ny tenany no ho ohatra ho an’ny hafa. Ny fomba fametrahana azy no ilana fahendrena tsara mba handeha miandalana fa tsy ho tampoka loatra. Ary ny fanatsrana ny fiaraha-monina mihitsy no atao fotony fa tsy hoe fiandrasana kendritohana fotsiny. Tahaka ny fitaizana ny zaza iray beazina eo anivon’ny ankohonana mantsy no fiheverako ny fitaizana ny fiaraha-monina. Raha tsara sy vanona ny ankohonana itomboany dia izao no teny fandre: »Mba zanak’iza lahy ireny? Izany ka zaza vanona » Ny mifanohitra aminy moa dia efa haintsika fa ny hoe: »Mba olon’iza koa no niteraka an’ireny? » Fantatra sy hain’ny be sy ny maro koa fa tsy misy zaza mahay izay tokony ho ataony ho azy izany fa mila toromarika izy, mila fanampiana ary indraindray dia mila « rotsa-kazo » aza. Ka tsy dia hevi-diso avy hatrany ilay lazainao hoe JADONA raha momba ny fampandrosoana any Madagasikara fa ny antony ampiasana azy no mila mazava tsara. Tokony ho an’ny tombontsoa iombonana fa tsy ho an’ny tombontsoan’ny mpitondra sy ny antokony fotsiny. Sa ahoana hoy ianao?
2 décembre 2007 à 21:51
Aiky[quote comment= »1568″]Tena henjana ilay resaka amin’ny teny malagasy voadika soa aman-tsara.
Fahaefatra, mila miara mirona sy miroboka fa tsy mialangalana. Samy mandray andraikitra fa tsy faly manakina be fahatany mba tena ho tsapa sy hita fa iny ianao nitondra ny anjara biriky.[/quote]
Tena mahafinaritra ilay fitondranao azy mba hahatonga azy hazava tsara amin’ny mpamky antsika. Fa zao AIKY a! Ndao rangahy tena handany ron-doha hijery ny raharaha amin’ny an-tsipirihany a! Hitako fa tena olona manana toe-tsaina mahay mamakafaka ianao. Tsy hoe manome tsiny ireo namana hafa aho raha milaza ny mampiavaka ny valin-kafatra avy aminao an! Samy manana ny mahasarika azy daholo mantsy ny olona rehefa omena fanomezana. Ny an’ny sasany avy hatrany dia ny vidin-javatra no tonga ao an-dohany raha vao mahazo fanomezana izy: « Ohatrinona izao no vidin’ity? » Ny an’ny sasany indray dia ny fonon’ilay fanomezana no tena asiany lanja be, ny an’ny sasany ny lanjany hoe firy kilao izy izany, ny an’ny sasany kosa dia ny hevitra tian’ilay mpanome fanomezana no tena katsahany ho takarina. Koa efa nanomboka ihany isika izao dia ndeha hiaraha-milanja. Ny tena marina ange tsy hoe fampiderana fahaizana malagasy ity sehatra ity fa famosahan-kevitra mitarika ho amin’ny asa mivaingana. Manana lohahevitra maromaro azo ifanakalozan-kevitra mantsy isika raha ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Ohatra amin’izany dia ny momba ny fifanavakavahana ao ami’ny samy malagasy, ny tantaran’i Madagasikara novain’ny Mpanjanaka, ny Fampianarana manaraka pedagojia mitrebona avy amin’ny nofon-tany malagasy. Tsy AIKY ihany no asaina amin’izany fa ny mpandray anjara rehetra. Hifampidinika amin’ ny fo tony isika, tsy amin’ny esoeso sy ny tsindrontsindrom-paingotra fa tena eo ambony lambanan’ny fihavanana malagasy.
3 décembre 2007 à 8:27
Azafady indrindra re ianao RANDRIANANDRASANA (ialako tsiny ny nampiasako renitsoratra fa izay moa no efa mipetraka amin’ny fanamarihana napetrakao koa), aza dia diso maneho fanetren-tena loatra fa manjary manalasala ny miteny raha vao hoe manisy fanamarihana ny olona iray dia raisin’ilay iantefany amin’ny hevitra tsy nanoratana azy, na koa tonga dia mea culpa be no vokany. Asa ianao raha efa sendra tranga indray andro hoe nandoka olona tamin’ny fo madio dia tezitra ilay olona nodokafanao fa nolazainy maneso ianao.
Izaho ry jentilisa tena tsy nieritreritra hoe ho masiaka fa karazana famporisihana ny mpitoraka blaogy hampiasa ny fiteny malagasy ny ahy ilay vazivazy hoe hasiana lalàna hoe teny malagasy madio iny. Raha hitsikera ny diso tsipelina no ataoko eto angamba diso adiresy aho, fa mba mahita aho hoe tena kanto ilay mamaky teny malagasy toy ny nataon’i Randrianandrasana, ka ilaina ny ezaka toy ny an’i Shadow na dia tsy voafehy 100% aza. Tsy misy na iray aza isika eto mahafehy ny fiteny malagasy, nefa samy malagasy, ka tsy mazoto ve ianareo raha izahay miseho milay ho mahay kokoa mba hitsikera hanitsy raha misy ny azo ahitsy? Izay no tiako hambara amin’ilay hoe ampianarina aloha. Tsy maneso sanatria fa fitiavan-tenin-drazana.
RANDRIANANDRASANA> raha misy nymanao teny malagasy lava ka rehefa mamaky ny an’ny hafa aho dia miaiky hoe nahoana moa ny hafa no manao hoe lava loatra ny lahatsoratro. Mitovy isika amin’io fa aza manahy ianao: jereo sahady anie izay nosoratako androany momba ny fizahambolongna volana novambra io e!
3 décembre 2007 à 23:45
Voaray tsara izao Dotmg a! Hitanao koa fa vaovao ny tena dia tahaka ny mpitsangatsangana tonga amin’ny tanàna mahafinaritra iray e! Ahoana ny fihetsika mety hasetrin’io mpitsangatsangana io ny hafatra tandrify azy rehefa sendra olona miteny aminy izy hoe: « Tsy azo ipetrahana eto, azafady! », « Tsy fanariana fako eto tompoko! », « Mety aminao ve ny mba mihataka kely, raha tsy mahadiso? ». Mety hisy anankiroa na maromaro aza ny karazana valitraika mety hasehony fa ny ahy dia nentiko tamin’ilay hoe: « Matoa tsara sy mahafinaritra ny tanàna dia noho ny ezaka ataon’izany olona mandrara sy manitsy ary manome soso-kevitra rehetra izany ». Ka tsy dia hoe milefitra be fahatany aho na sanatria manao fanetren-tena haitraitra na maneso. Tsy izay mihitsy fa dia hoe amin’ny « tena » mbola vahiny vahiny izay e! Ho hitako tsikelikely eo ihany ny mangidy ho aloha araka ny hifankazarantsika. Mitsotra lavalava anefa aho fa tsy mbola dia tena ho avy hatrany dia ho raitra be tahaka ny hafa efa mahay fa miandalana.
3 février 2011 à 17:08
Mpmpalahelo ny toe- tsaina ny malagasy tsia mba ho mety mivelatra fa dia tery foana
18 novembre 2014 à 8:16
Areno refa mampalahelo fa tsy vitan’ny fitserana fotsiny io. Ndao ary hiara hanandratra an’ny Malagasy
Tanora, leadership ary Entreprenariat
Rétrospectives des dernières années